SAWIRRO: Muxuu Axmed Madoobe kala hadlay Xildhibaanada laga soo doortay Puntland? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Muxuu Axmed Madoobe kala hadlay Xildhibaanada laga soo doortay Puntland?
May 10, 2022 Xuseen 7
Madaxweynaha Jubbaland H.E Ahmed Mohamed Islaam ayaa maanta kulan kula qaatay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Xildhibaanada labada Gole ee BJFS ku matalaya Puntland.
Kulanka ayaa looga hadlay xaalada guud ee dalka iyo doorashada Madaxweynaha 10-aad ee JFS.
Qoraal lagu baahiyay barta Facebook ee Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu yiri “Waxaan maanta kulan miro dhal ah yeelanay Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah labadiisa Aqal ku matala Puntland oo aan ka wada hadalay xaalada uu dalku ku jiro iyo sidii looga dhabayn lahaa filashooyinka shacabka Soomaaliyeed ee dhismaha Dowlad Cusub oo dalka ka saarta xaaladan adag.”
Dadka xadaaradda ilbaxnimo ehelkeeda ah waxay madaxdooda ku doortaan manifeestada ay kuwa tartamaya shacabka usoo bandhigaan iyada oo oraah iyo qoraalba isugujira, taasoo ay si bayaan ah ugu sharraxayaan hiraalka ay dalka lahiigsanayaan iyo hannaanka dawligoodu habka uu ushaqeyn doono.
Sidii aan horeba ugu dooday, waajibku wuxuu ahaa in doorashadu shacabka salka kuhayso oo ol’olaha murashaxnimada madaxweynaha qarankana heerka dowlad goboleed lagasoo agaasimo oo shacabkana kusaleysnaado. Waxaa saxsanaa in murashax walba caasimadaha dowlad goboleedyada booqdo oo manifeestadiisa marna fagaare, marna TV-yada maxalliga ah hortooda shacabweynaha ugu kala dhigdhigo.
Kaddiibna, waxaa jira hab dawaali ah oo uu shacabku murashaxiinta ugu kala codeyn lahaa, iyada oo aan xaanshi xun iyo sanduuqa lagu ridayo midna looba baahanin. Habkaas ayaana midkasta magaalo waliba loogu codeyn lahaa oo kaddibna lagu kala dareeri lahaa, kan aqlabiyadda kasoo helayna inta Xamar la isla aado baarlamaanku toos u ansixin lahaa oo xilka madaxweynenimo loogu caleemasaari lahaa.
Isla waddamadii hannaankaas hayinka ah shacabweynaha Soomaaliyeed iskaga gudbay ayaa hannaankan xaaraamiga ah inta dalka ku laazimeen tuugadan wada rashaxanna la kalasafan oo taakuleynaya. Hadafkuna waa in Soomaalidii lahayd aysan Soomaaliya maamulan e ay waddamadaasu maamushaan oo qummaatina u kufsadaan.
Kuwiinna tuugadan dalkooda iyo dadkiisa sidan ukhiyaameynaya ee cadaawaha qalaad afka uggelinaya la kalasafan oo u kala hiilinaya ayaa ah nacasyada dalka ku noqday nacabka sokeeye ee aayahiisa kaga khamaaray. Dal dadkii lahaa dhacayaan cadow lagama dhicin karo!
Mohamed Obsiiye says:
Mr Awlal, waa kugu raacsanahay in waxyaalaha aad kor ku qortay ay jiraan oo badanka Siyaasiyiinta Somalida ay u kala shaqeeyaan dawlado iyo ururo shisheeye, basle way kala roon yihiin, qaarbaa awrkooda ku kacsanayaoo waxoogaa dhaqaale meesha geliyey, qaarna waa kuwo la leeyahay 100%, markaa dee kollay kuwaas baa jooga maanta ee aan kala doorano siday isu kala dhaamaan, kollay dadka Somalida ee kuwaas ka soo baxeen baynu nahay oo innaga lafteena baa wax innaga wada qaldan yihiin.
Dalka guushiisu waa Dani ee aynu soo dhowayno Madaxwaynaha qaranka mudane Dr Dani
Reer deni says:
Waad kumahadsantahay inaad xaqa iyo runta lasafatay. Waxaanse kaxumahay dareenka aad muujisay ee ah kan Soomaalida ku dambeysiiyay dulliga iyo darxumada ay maanta oo 2022 ah la daalaadhacayso iyada oo 1960kii heeryadii gumeysiga iska dulkicisay.
Dareenkanu waa isdhigashada (complacency) dadkasta oo gob ahaan jiray uhorseedda isdhiibka (surrender) ku dambeysiiya gun damiirkii iyo damqashadiiba ka dhinteen oo sida la doono loogu tumanayo.
Siyaasiyisintu sikasta oo ay inooga dhasheen, mar haddii ay aayatiinkeenna iyo jiritaankeenna halis xun ku noqdeen oo nacab shisheeyena lasafteen waxaa waajib diini iyo dhaqameedba ah inaynu iska qabanno oo sharkooda iska bedbaadinno.
Haddii kale, ciribxumada ay inoo horseedayaan annaga iyo jiilasha dambe ayaa sixun u eedi doonna. Belaayo daaman laqabto ayay leedahay e dabo laqabto maleh. In aynu isdhiganno oo isdhiibno dow inoo ma aha.
Qofkasta oo kadhiidhiyaya waa inuu haddeer ka qayladhaamiyo oo cod sarena ugu dhawaaqo, waayo waa Jihaad rasmi ah.
Waa marka hore – Kuwani xildhibaano ka soo doortay ma aha ee waa,kuwo uu soo xulay ,madaxa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya mudane Deni.
Waxaa hubaal ah Kuwan iyo kuwa Gobolada kale ee Soomaaliya in aysan cidna si sharci ah,uga wakiil ahayn.
Gunaanadkii,hadii ay inaba,ay leeyihiin garasho xitaa aad u yar ,ma dooran doonaan Siciid Deni oo ah shaqsi,baabi’yey Puntland.
Axmed Madoobe,waa nin markii horaba si qalad ah ku yimi maamul Jubada Hoose siiba Kismaayo,waa nin ka mid ahaa,argagixisadii al shabaab,xisbul islaam,iyo Raas kambooni oo uu madax u ahaa,taaai oo ay Kenya samaysay.
Axmed Madoobe waa uu sashay,mudo dheer oo 10 dano ja badan buu Kismaayo boob iyo musumaasuq ku hayey.
Waxa uu mari,halkii ay mareen,Xoogagii Caydiid,Morgan,Bare Hiiraale argagixisada al shabaab,waxa u haray shaki kuma waa mudo kooban.
Soomaaliya guul midnimo
Wale nin cilqaba waa nin cilqaba
Yaabnay axmed islan deni iwm
Sual adigu maxaad doneysa marka
Labad ma dowlad ba rabtaa mise shaqsi
Yab oo yabnayee..